ब्रोकरले नियामकलाई चुनौति दिने मुलुक सायद नेपाल मात्रै होः सेबोन अध्यक्ष कार्की – Clickmandu
ब्रोकरले नियामकलाई चुनौति दिने मुलुक सायद नेपाल मात्रै होः सेबोन अध्यक्ष कार्की
क्लिकमान्डु २०७६ असोज ७ गते १०:३९ मा प्रकाशित
डा. रेवत बहादुर कार्की, अध्यक्ष- नेपाल धितोपत्र बोर्ड
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको यही असोज महिनामा कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो कार्यकालमा २ सयभन्दा बढी काम गरेको कार्की बताउँछन् । पुँजी बजारको सुधारका लागि आफ्नो कार्यकाल स्वर्णिम युग भएको उनको भनाइ छ । कार्कीलाई चिन्नेहरु उनी आर्थिक मामिलामा निष्कलंक भएको बताउँछन् ।तर, केही दिनअघि कार्कीले ६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । कार्यकालको समीक्षा, सुधारका कामहरु, झेल्नुपरेका दबाबहरु र अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा केन्द्रिथ रहेर क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले अध्यक्ष कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
धितोपत्र बोर्डमा तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्यो । आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
म आएपछि बोर्डले साना र ठूला गरेर २ सयभन्दा बढी काम गरेको छ । म आउनुपूर्व नियामक निकाय भन्दापनि आत्मग्लानी हुने अवस्था थियो । त्यो बेला सेयर बजारमा लाइन लाग्नुपर्ने, बोरा बोकेर हिँड्नु पर्ने, आफ्नो पैसा लिन पनि लाइन लाग्नु पर्ने, हकप्रदका लागि पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । म आएपछि त्यो सबै हटाएँ । म पहिला स्टकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा नै पहिलो चरणको सुधार गरेको थिएँ । जसअनुसार गैरमुनाफाकारीलाई मुनाफाकारी बनाउने, नेप्सेको संरचनामा परिवर्तन गरेको थिएँ ।
बोर्डमा आउँदा मैले पहिला नै २ पेजमा यो-यो काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ । देशको अर्थतन्त्र, कानून, नियमन चलाएको, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, बैंकिङ बुझेको कारण पनि मैले यो यो काम गर्छु भनेको थिएँ । अहिले सबै पूरा भएका छन् । मैले ५ वटा सरकार र ५ वटा अर्थमन्त्रीसँग काम गरे ।
मैले यहाँ काम गर्दा मेरो अनुभवको कारण पनि एउटा कोणबाट भन्दा पनि विभिन्न कोणबाट काम गर्नुपर्छ भनेर पहिलो बजार, दोस्रो बजार, ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकको कार्यक्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, बोर्डको आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई परिवर्तन गर्नेदेखि सुपरीवेक्षण गर्ने, बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम पनि गरेको छु । मैले कानूनी संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ ।
बजारलाई दक्षिण एशियामा नै उल्लेख्य बजारको रुपमा विकास गरिएको छ । पहिलो आईपीओ आएपछि सूचिकरणमा ६ महिना लाग्ने गरेको थियो । ९० दिन लाग्नेलाई एक साता र ६ महिना लाग्नेलाई ३० दिनमा काम गर्ने, व्यवस्था लागू गरियो । आश्वा लागू गरियो । पछि सी-आश्वा पनि सिडिएससी अन्तर्गत रहेर आयो । यसले बजारमा ठूलो फड्को मार्यो । सबै लगानीकर्ताले १० कित्ता पाउने व्यवस्था पनि गरियो । गृहिणी, विद्यार्थीलाई लगानीगर्न सजिलो होस् भनेर ५० कित्ताबाट १० कित्तामा पनि झारियो । सेयर बजारको लागि ऐतिहासिक काम पनि भएको छ ।
प्राथमिक बजारका रियल सेक्टर कम्पनी आएनन् भनेर सरकारले विभिन्न योजना पनि ल्याएको छ । रियल सेक्टरको लागि प्याकेज नै बनाएर ल्याउनको लागि सरकारले १५ देखि २५ प्रतिशत छु्ट दिने, प्रिमियममा जान पाउने भन्ने व्यवस्था गरेपछि केही कम्पनी पनि आए । एफपीओ बर्षेनि आउने गरेको थियो । हामीले त्यसलाई पनि सिस्टममा ल्यायौं । पहिला यसमा प्रत्यक्ष नियमन गर्ने निकाय थिएन । हामीले त्यसलाई केही समय रोकेर केही मापदण्ड पनि बनायौं ।
दोस्रो बजारमा २०६४ सालमा ट्रेडिङ अटोमेसन गरियो । अटोमेसन, नामसारी र क्लियरिङ महत्वपूर्ण हुन् । नामसारीमा धेरै समय लाग्ने गरेको थियो । पछि ३ दिनमा भयो । एकमात्रै क्लियरिङ बैंक थियो । हामीले थप्न लगायौं । दोस्रो बजारमा शुल्क ‘रिभाइज’ गर्यौं । यो बीचमा हामीले मार्जिन कारोबार पनि शुरु गरियो । यसले एक ठाउँबाट धेरै काम भयो । हामीले यसको ब्याजदर लगानीकर्ता र ब्रोकरले नै फिक्स गर्ने हो भनेर हामीले राष्ट्र बैंकमा कुरा गर्यो । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटी पनि लागू गर्न लागेका छौं ।
यतिधेरै काम गर्दा दबाब चैं कति आए ?
काम गर्दा धेरै नै दबाब आयो । गाली पनि धेरै खाए । सुधारबाट तर्सिएका मान्छेले धेरै गाली गरे । तर मैले त्यसको कुनै प्रवाह गरिँन । र, मेरो कार्यकालमा इतिहासमै नभएको काम भयो ।
तपाइले धेरैवटा सरकारसँग काम गर्नुभयो । सरकारबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
धेरैसँग काम गर्दा केहीमा यस विषयमा जानकारी र ज्ञान नभएका अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो भने देशको अर्थतन्त्र, कानून, नियमन चलाएको, अन्तराष्ट्रिय ज्ञान, बैंकिङ बुझेको कारण पनि मलाई सबैलाई बुझाउन सक्ने क्षमता मसँग थियो । मेरो अनुभवको कारण मैले भनेपछि कुरा काट्नुन्नथियो । ५ वटा सरकारसँग काम गर्नुभन्ने नै चानचुने कुरा होइन । केही नबुझ्ने, केही राजनीतिकरुपमा हेर्ने र केही निकै जान्ने पनि हुनुहुन्थ्यो ।
कुन अर्थमन्त्रीसँग काम गर्न सजिलो लाग्यो ?
बर्गिकरण गरेर हेर्न त मिल्दैन । तर पनि काम गर्न सजिलो भएको पहिलो नम्बरमा डा.रामशरण महत र दोस्रोमा डा. युवराज खतिवडा नै हुन् । उहाँहरुलाई चाँही कुनै पनि विषयमा यो यस्तो हो, विश्वमा यस्तो अभ्यास छ भन्दा सहजै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंक जति स्वायत्त छ, धितोपत्र बोर्ड त्यति स्वायत्त देखिँदैन, मन्त्रालयको बढी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?
जतिबेला नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण भयो । त्यसैबेला देखि राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर वल्र्ड बैंक, आईएमएफले पनि भने । बोर्डको स्वायत्तताको विषयमा कसैले पनि कुरा गरेनन् । हामी बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर सूचिकृत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत कम्पनी, उत्पादनमूलक क्षेत्र हेर्ने गरेका छौं ।
हामीलाई कुनै पनि संस्थालाई नियमन गरेर आर्थिक जरिवाना गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार रहेको छ । अरुलाई छैन । यसको संस्थागत क्षमता बनाउन आवश्यक छ । स्वतन्त्र नभइ काम गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । मेरो कार्यकालमा ब्रोकरलाई १० लाख जरिवानादेखि धेरै काम भयो । नियामक भएपछि डराएर हुँदैन । तैपनि मैले कारबाही गर्नका लागि १ वर्ष कुर्नु परेको थियो ।
एक वर्ष किन कुर्नु पर्यो ?
कारबाही गर्ने भनेर भन्न त भनियो । त्यसको लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधि डराउने, केही के भन्ने गर्दा निर्णय गर्न समय लागेको थियो । तर निर्णय चाँही गरेरै छाडियो ।
सेयर बजारमा कालोधनको भएको विषय बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छ । बोर्डले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनमा के भेटियो ?
कालोधनको विषयमा हामीले कुनैपनि प्रतिवेदन बनाएको छैन । त्यसको लागि हामीले समिति मात्रै बनाएको हो । त्यो समयमा सुपरीवेक्षणलाई अघि बढाउने भनेर समिति मात्रै बनाएको हो । रिपोर्ट बनाएको हैन । त्यो समितिले काम गरिरहेको छ । अहिले नेपाल धेरै कमजोर भएको छ । अर्को वर्ष हाम्रो मूल्याङकन पनि हुँदैछ । त्यो अवस्थामा निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ । ३ वर्षअघि श्रीलंका पनि कालोसूचीमा परेको थियो । हाम्रामा पनि सुशासन आवश्यक छ ।
सेयर बजारमा कालोधन कुन मात्रामा होला ?
बजारमा कालोधन छ कि छैन भन्नु भन्दा पनि यसलाई अर्को तरिकाबाट हेनुपर्छ । हामीले आर्थिक कारोबार नगदमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं, कारोबार बैंकबाट मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । पहिला म्यानुअल कारोबार गर्दा के हुने गरेको थियो होला ? अहिले पारदर्शी बनाएका छौं । सफ्टवेयरले केही हेर्दैन । ठूलो सानो भन्ने हुँदैन यसमा । हाम्रो भौतिक पूर्वाधार हेर्न आवश्यक छ । त्यही अनुसारको क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ ।
अहिले हाम्रो क्षमता बढाउन आवश्यक छ । बोर्डको क्षमता पनि पूर्ण छैन । अटोमेटेड सर्भिलेन्स सिस्टम आवश्यक छ । यसो हेर्नासाथ सबै थाहा पाउनु पर्छ । स्टकले एउटा ल्याएको छ ।
नेप्सेले ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा धेरै समस्या आए भन्ने गुनासो छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यो हामीले भन्दा पनि तपाइंहरुले नै हेर्नु भएको होला । हामी जहाँ जाँदा पनि यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले बोर्डले ५ सदस्यीय अध्ययन कमिटि बनाएर अध्ययन गरेरसरकारलाई रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ । त्यसमा समस्या रहेको र सुधार गर्दै जाउ भनेर नेप्सेलाई पनि भनेका छौं ।
त्यो नयाँ अनलाइन कस्तो भनेर हामीले जानकारी पाएको छैन । त्यो सफ्टवेयर हामीले स्वीकृत गरेको पनि हैन । नेप्से पनि फ्रन्टलाइन रेगुलेटर हो । हामीले त इन्टरनेशनल कम्प्याक्टेबल टेस्टेड सिस्टम चाहिन्छ भनेको हो । अनलाइन ल्याएपछि बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति लिने कुरा पनि सुनेको हो
२०६३ मा अटोमेसन गरेपछि एनआरएन ल्याउने भनेर मैले प्रयास गरेँ । उनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आउन कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरीरहेका छौं भनेर सोध्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भित्र्याउने अनि लोकल सफ्टवेयर राखेपछि कसरी विश्वास गर्छन् ? अनि एनआरएनएले सुविधा धेरै खोज्छन् । फेरि उनीहरु समाजसेवा गर्न आउने पनि त हैनन् । उनीहरुलाई लगानी गर्न दिएर बजार सिध्याउनु पनि त भएन । कति लगानी गर्न दिने, कतिबाट शुरु गर्न दिने ? र, कति वर्षमा कति प्रतिशत लैजान दिने भन्ने विषय अहिले रोकिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र एनआरएनसँग कुरा भएको हो । आधारभूत काम नै हुन बाँकी छ । हाम्रो अनलाइन सिस्टम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ भनेर कसरी भन्ने ? समस्या यहाँ छ ।
नेप्सेको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
नेप्से भनेको सरकारी संस्था हो । यो भनेको निजीकरण ऐन अनुसार काम हुन्छ । मैले त्यो समयमा नेपाल टेलिकमलाई त्यही अनुसार लिस्टिङ र ट्रेडिङ पनि गराएँ । यति लामो समय लाग्ला भन्ने लागेको थिएन । सरकारी भएका कारण हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौं ।
निजी क्षेत्रले पनि आवेदन दिएको थियो नि, हैन ?
त्यो त पहिलाकै हो । नयाँ आवेदन आएको छैन । यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने सैद्दान्तिक सहमति भएको छ । त्यो विषय हाम्रो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेका छौं । नेप्सेको सुधारसहित नयाँ चाहिन्छ भनेको हो । यो भयो भने बजारमा सुधार हुन्छ । निजी क्षेत्रको नेप्से हुँदा बिग्रने हैन । ब्रोकरले दुवैतिर कारोबार गर्न पाइहाल्छ । लिस्टेट दुवैतिर हुन्छ । त्यो हुँदा बजार नै अर्कै हुन्छ ?
कमोडिटी बजारको काम अहिले कहाँ पुग्यो ?
मेरो अनुभवको कारण हामीले त्यो ल्यायौं । एउटामात्रै हुँदा मनोपोली हुन्छ । विकसित देशमात मर्जर पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा भर्खर सुसाशन निर्देशिका लागु भएको छ । अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सरकारले पनि बोर्ड र नेप्सेको सुधारको कुरा गरेको छ । स्टकको नियमावलीमा त्यो चाँही नीति क्षेत्रको कुनुपर्छ भन्ने नै व्यवस्था रहेको छ । त्यही भएर हामी शुरुदेखि नै २ वटालाई मात्रै दिनुपर्छ भन्नेमा नै थियौं । सञ्चालक समितिले चाँही एउटामात्रै नगरांै फेरि आँउछ कि आउँदैन भन्यो । अनि हामीले माग्यो माग्दा ५ वटा आए । के को हिसाबले दिने भन्ने अन्योलता भयो ? त्यहाँ २ वटालाई दिने भन्ने पनि थिएन । यसमा हामीले सञ्चालकलाई दोष दिने अवस्था पनि थिएन । पहिला त हामी नै कन्फिडेन्ट हुन आवश्यक थियो । सञ्चालकमा प्रष्ट नभए पनि म चाँही मेरो अनुभवले प्रष्ट थिएँ । के गर्नु मेरो मात्रै निर्णयले नहुने । सबै कमोडिटी बुझेको मान्छे थिएनन् । पछि यो–यो समस्या हुन्छ भनेर बुझाएँ । त्यसपछि हामीले पुन माग्यौं । अब जति आवेदन दिए पनि हामीले नम्बरको आधारमा छनोट गर्ने सिस्टम ल्याएका छौं । यसमा यति नम्बर दिने भन्ने छ । त्यो भयो भने कुनै समस्या हुँदैन ।
तपाइको कार्यकालयमा यो कामले पूर्णता पाउला ?
हामीले अर्थको सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको ३ जनाको कमिटिले सिफारीस गर्ने भनेको छ । त्यसले गर्दा कमिटिलाई दिएको छ । हामीले हस्तक्षेप गर्न भएन ।
अहिले तपाइंहरुले पुराना कमोडिटीलाई अवैधानिक भन्नु भएको छ, बजारमा कारोबार भइरहेको छ । जनता ठगिने भए नि त ?
बजारमा कारोबार भएको छ भन्ने कुरा हैन । हाम्रो जानकारीमा कसैले पनि चलाएको भन्ने छैन । यदि उनीहरुले चलाएको हो भने पनि हाम्रो सुपरिवेक्षण केही कमजोर भएको हुनसक्छ । त्यसरी चलेको पाए कारबाही गर्छौं । हामीले समयमा स्वीकृति दिन नसकेकै हो । त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ । हामीले सुपरिवेक्षण गर्न त अनुमति नै दिएको छैन के सुपरिवेक्षण गर्नु ? भन्ने पनि हो । अवैधानिक काम भए पनि सरकारले देखेको हुँदैन ।
पुँजीगत लाभकरको विवाद कहिले टुंगिन्छ ?
पुँजीगत लाभकरको विषय सरकारको विषय हो । यो कर पनि हो । त्यो अरुले गर्न नसक्ने विषय हो । भारित भनेर लेखेपछि सरकारले नै गर्ने हो । यसमा विधि लेख्नु पर्ने हो । विधि लेखिएन । त्यो बेला विधि नभइ स्वाट्टै आयो । हामीले अहिले विधि दिने हैन । त्यही भएर समस्या भएको हो । यो हामीले गर्ने हैन अर्थमन्त्रालयले गर्ने विषय हो । करको विषय भएकोले करदाताले नै सबै व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामीले यसमा सहजीकरण गर्न लागेका छौं । तर हामीले यो र्न गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दैनौं । यो विषय बजेटमा नै प्रस्ट भएर आउनु पर्ने हो । त्यो भएन ।
धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तासँग दोहोरो कमिशन लियो भनेर विरोध पनि हुने गरेको छ, किन दोहोरो कमिशन लिएर लगानीकर्तालाई मर्कामा पारेको ?
यो चाँही दुध दिने गाइको पुच्छर निमोठने जस्तै हो । हामीले अहिलेसम्म जे–जे गरेका छौं । त्यो सबै लगानीकर्ताको हितको लागि भनेर गरेको हैन र ? सबैबाट गाली खाएर पनि लगानीकर्ताको लागि नै काम गरेका छौं । पहिला यो संस्था सरकारले दिएर चल्थ्यो । अहिले सरकारले नै ०.६ प्रतिशत हामीलाई दिएको छ । नेप्सेले हामीभन्दा बढी लिएको छ । नेप्सेले लिएको कसैले कुरा नै गर्दैनन् ।
बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषयमा बोर्डको पछिल्लो धारणा चाँही के हो ?
यो प्रतिस्पर्धी जमाना हो । लगानीकर्ताले धेरैभन्दा धेरै सेवा पाउनु पर्यो । ब्रोकरले पनि शाखा खोल्न पाउनु पर्यो । बैंकलाई दिने भनेको उसको सहायक कम्पनीले काम गर्ने हो । बैंकको क्षमता पनि बढी छ । त्यही भएर बैंकलाई दिएपछि बजारमा सुधार आउने र लगानीकर्ताको माग पनि त्यही नै रहेको थियो । हाम्रो उद्देश्य ब्रोकरलाई सिध्याउने हैन । त्यो समयमा पनि २३ बाट २७ वटा मैले नै थपेको हो । त्यो बेला २७ वटा थप्दा हामी सकिन्छौं भन्थे । खै सकिए त ? ट्रेडिङ अटोमेसन हुनुअघि दैनिक १ करोड हुने गरेको थियो । त्यसपछि २० करोडसम्म भयो । टि प्लस थ्री भएपछि २ अर्ब २५ करोडसम्म भयो । त्यसकारण बजारको विकासको लागि काम छ । यो नियमावलीमा नै छ । यो सरकारले पनि गरेको काम हो । त्यसमा भनाई भने हामीले खाएका छौं । बजारको विकास गर्ने हो भने त्यो आवश्यक छ । बैंकलाई दिँदा अहिले २६ वटा जति होला त्यो भन्दा बढी हुँदैन । विस्तारै शाखा खोलेपछि जाने हो । शाखा नखोली पाउँदैनन् ।
आफ्नो कार्यकालयमा यति राम्रो काम गरे भन्नु भयो । तर लगानीकर्ताले त तपाईंको राजीनामासम्म मागे नि ?
ती मान्छे कताबाट परिचालित थिए भनेर बुझ्न आवशयक छ । उनीहरु मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग जान सक्छन् । तर गएनन् । हामी असुरक्षित छौं । त्यसैले हामीकहाँ आए । वास्तविक लगानीकर्ता भन्न सक्दैनन् । लगानीकर्ताले हामीले के गर्छौं भन्ने बुझेका छन् । केही हल्लाको भरमा जाने पनि छन् । तर हामीले उनीहरुको लागि काम गरेका छौं । यो दुध दिने गाइको पुच्छर निमोठेजस्तै हो ।
ब्रोकरहरु पनि तपाइंको विरोधमा निस्के, सरोकारवालासँग किन सकरात्मक सम्बन्ध रहन नसकेको होला ?
कुनै मान्छेले कुनै पनि स्वार्थ नराखी बजारको विकास, लगानीकर्ताको, ब्रोकरको हितमा काम गरेको छ भने उ कुनै पनि हालतमा डराउँदैन । यो सानो ठाँउ छ । ब्रोकरले नियामक निकायलाई च्यालेञ्ज गर्ने मुलुक नेपाल मात्रै होला । हामीले ब्रोकरलाई डिलरसीप दिने, एडभाइजरी दिने, मार्जिन ट्रेडिङ गराउने काम गरेको छु । ब्रोकरलाई ब्रोकर जस्तो बनाएको पनि मैले नै हो । तै पनि फाट्ट–फुट्ट केही भएको होला ।
अन्तिम समयमा आएर तपाईको विषयमा अख्तियारमा मुद्दा पर्यो । यस विषयमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
त्यो भनेको अहिले धितोपत्र बजारमा भएको सुधार देख्न नसक्नेले नियोजितरुपमा चरित्र हत्या गर्ने योजनासहित लागेका हुन् । मैले एक पैसा पनि लिएको छैन । मसँग सबै कागजात छ हेरे हुन्छ । हामीले बदमासी गरेको छैन । स्पष्टरुपमा भन्दा मर्का परेको होला । बजारमा यसले रेगुलेशन नगरे हुने, कारबाही नगरे हुने भन्ने मानसिकता हुने रहेछ । तर हामी कडा भएर आयौं ।
बिदा लिएर टोकियो सेमिनार जानुभयो, त्यहाँ भएको खर्च तपाइंको व्यक्तिगत हो की बोर्डको ?
म त्यहाँ बिदा लिएर गएको हो । मलाई त्यो कार्यक्रममा जाने समयमा फाइनान्सीयल सर्भिसेज एजेन्सीले मलाई बोलायो । मलाई त्यहाँको लागि टिकट दियो । बस्न पनि दियो । मैले बोर्डलाई दायित्व पारेको छैन । एकसाता बिला लिन सक्ने बोर्डलाई दायित्व नलगाउने भएर गएको हो । त्यो विषयमा अब अख्तियारले के हेर्नु र भएपो हेर्नु ? अख्तियारलाई थाहा छ रेवतबहादुर कार्कीले र बोर्डले के गर्छ भनेर । जसले बदमासी गरेको उसैले यो सबै गरेको हो ।
अख्तियारले प्रष्टिकरणको लागि बोलायो कि छैन ?
कहाँ प्रष्टिकरणको लागि बोलाउँछ । बाबा, उजुरी दिँदैमा गर्छ त ? यहाँ त अख्तियारको कुनै चिठ्ठी आएको छैन । जसले यो काम गरेको हो उ पछि पछुताउने दिन आउने छ । मैले गल्ती गरेको रहेछ भने पदमा हुँदा मात्रै हैन बाहिर भएको समयमा कारबाही गर्न सक्छ । मैले गल्ती गरेको छैन । म डराएको पनि छैन । अख्तियारसँग मेरो सम्पर्क भएको छैन । अख्तियार आएपनि, अख्तियारको बाजे आएपनि गर्ने केही गर्ने हैन । अख्तियार सम्बैधानिक निकाय हो उसले हेर्न चाहेको समयमा हेर्नसक्छ ।
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा माग भन्दा ८ गुणा बढी पर्याे आवेदन
पुँजीबजारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कडाइका साथ लागु गर्दै सेबोन, सुपरिवेक्षण म्यानुअल लागू
सेयर बजारमा गिरावट, यी कम्पनीकाे काराेबारमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, १० कित्ता आवेदन दिनु उपयुक्त
जलविद्युत कम्पनीले मात्रै थेग्न नसक्दा सेयर बजारमा करेक्सन, हाईड्रोका लगानीकर्ता मालामाल